Wararkii ugu dambeeyay Mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaare Kheyre oo bilowday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Ahmed weheliye Gaashaan 15 March 2018
Mooshin ka dhan ah Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa ka bilowday magaalada Muqdisho, iyadoo ay diyaar garowgiisa ay wadaan Xildhibaanada taageersan Guddoomiye Jawaari.
Warar lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in saxiixa mooshinka uu xalay saqdii dhexe kor u dhaafay illaa afartameeyo Xildhibaan, waxaana mooshinkan uu jawaab u yahay mooshinkii laga keenay Jawaari ee Guddiga Joogtada buriyeen, hase ahaatee Guddoomiye kuxigeenka 1aad ku dhawaaqay inuu ahaa mid sharci ah.
Qaar ka mid ah Xildhibaanada Golaha Shacabka ee horay u dhaliilsanaa Xukuumadda ayaa ku tilmaamay Mooshinka Jawaari inuu yahay mid boor isku qaris ah oo ay Xukuumadda ku dooneyso inay ku jahwareeriso howlaha Baarlamaanka iyo la xisaabtanka Xukuumadda.
Wararka ayaa intaa ku daraya in kulamo aan loo kala kicin xalay ka jiray magaalada, iyadoo magaalada aan laga seexan, waxaana xaalada u muuqataa mid faraha ka sii baxeysa.
Xiisada siyaasadeed ee ka dhalatay mooshinkii laga keenay Jawaari ayaa saameyn ku yeelatay Xafiisyada Madaxda sare ee dowladda oo la ogaaday in laga soo abaabulay, gaar ahaan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo ololaha ugu xooggan ee ka dhan ah Jawaari ka socdo.
Dhinaca kale Guddoonka Baarlamaanka ayaa labo u kala jabay, waxaa hal dhinac ah Guddoomiye Jawaari iyo Guddoomiye kuxigeenka Labaad Mahad Cawad, halka Guddoomiye kuxigeenka 1aad C/wali Muudey uu dhinac kale yahay.
Lama oga halka ay xaalada ku dambeyn doonto, waxaase muuqata in xaalad fowdo iyo qalalaase uu galo Golaha Shacabka, taasoo laga yaabo inay saameyn ku yeelato Kulamadii Baarlamaanka